खनाल बयोवृद्ध तन्नेरी - Jhilko
चैत्र १८, काठमाडौं । भारत केरलाका ९५ वर्षीय पूर्व मूख्य मन्त्री अच्युतानन्दलाई भेटेर आएपछि आफू तन्नेरी नै भएको होस खुलेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता झलनाथ खनालले सञ्चारमाध्यमहरुमा बताएका छन । पूर्व मुख्यमन्त्री भि. एस. अच्युतानन्दको ९५ वर्षमा पनि सक्रियता देखेर उनले यस्तो खुलासा गरेका हुन । पानीपँधेरो चीन धाउने नेता खनालको निर्वाचनको मुखमा यो भ्रमण किन गरे रहस्यमय नै छ । भारतको राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै प्रभाव पार्ने बेलामा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका खनालको यो भ्रमणको निहितार्थ भने ओझेलमै छ । यस्तो बेला कुनै एक पार्टीका नेतालाई मात्र भेट्दा पनि दुई छिमेकी देशवीचको सम्बन्धमा कस्तो असर पर्छ भन्ने सवाल पूर्व प्रम खनालले ख्याल नगरेको कुरा कूटनीतिका जानकारहरु बताउँछन् ।
भारतको तल्लो सदन लोकसभाको निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा खनाल केरला किन हान्निएका हुन उनले खुलाएनन । तर, भेटघाटमा कम्युनिष्ट आन्दोलन, भारतको आसन्न लोकसभा चुनाव र केरलाको सम्भावित चुनावी नतिजाका विषयमा केन्द्रित भयो भनेका छन् । यता अच्युतानन्दले कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा नेपाल समृद्ध बनोस् भनेको नेता खनालको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
भारतमा अप्रिल ११ देखि लोकसभाको निर्वाचन आगामी मई १९ तारिखसम्म सात चरणमा हुँदैछ । निर्वाचनको नतिजा २३ मईमा हुने कुरा भारतीय निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका सहित प्रकाशित गरेको छ । भारतमा कम्युािष्टहरुको गढ मानिने केरला राज्य नै यस्तो राज्य हो संसारमा पहिलो पटक संसदीय निर्वाचनमा भाग लिएर कम्युनिष्टहरुले सरकार बनाए । अहिलेसम्म पनि केरलामा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी) समर्थित सरकार छ ।
म्याराडोनाले आफ्नो फुटबल टिमको जीत भेनेजुएलालाई समर्पित गरे
भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले बिबिइएन समूहमा नेपालको बलियो प्रतिबद्धता ठोस गर्न...
सस्तो प्याज किन्न दिल्लीमा उपभोक्ता लामबन्द
बजारमा प्याजको भाउ बढेपछि सरकारले सस्तोमा प्याज उपलब्ध गराउने स्थानमा उपभोक्ताहरू...